Kenya: Booliska oo Ku Xadgudba Qaxootiga Nairobi | Human Rights Watch
May 29, 2013 9:33AM EDT
Jirdil, Kufsi, Laaluush Qaadasho,iyo Xiritaan aan Sharci ahayn oo u Dhow Faras Magaalaha Caasimada Kenya
Dumar Soomaliyeed iyo carruur ka cararaya guryahooda xaafada ay soomalida ku badantahay ee Eastleigh ee Magaalada Nairobi, 20-kii Novembar, 2012-kii. Waxay ahayd laba maalmood ka dib markii weerar dad aanan la garaneyn ay ku qaadeen bas xaafadda marayey ay ka dhasheen rabshado iyo weerar lala beegsaday qaxootiga soomalida ah iyo Soomalida u dhashay Kenya. Booliska ayaa soo afjaray rabshadihii, balse waxay haddana kula kaceen dadkii xaafada kunoolaa toban isbuuc oo jir dil iyo xadgudubyo kale ah, dhibatadaas oo saameysay ugu yaraan kun qof oo qaxooti, dad magangalyo doon ah iyo dad soomali ah oo reer Kenya ah. © 2012 REUTERS/Noor Khamis
Booliska Kenya ayaa Magaalada Nairobi ku jir dilay, ku kufsaday, ama xad gudubyo ugu geystay isla markaana si aan sharci ahayn u xirxiray ugu yaraan 1,000 qof oo qaxooti ah intii u dhexeysay bartamihii bishii Nofember 2012 iyo daba yaaqadii Janaayo 2013, Human Rights Watch ayaa sidaa ku sheegtay warbixin la sii daayay maanta. Hayadaha dowliga ah waa in durba ay furan baaritaan cad oo madax bannaan,hayada QM ee Qaxootiga—oo iyana aan si cad uga hadlin xadgudubyada—waa in ay qorto oo si cad u soo tebiso wixii xadgudubyo ah oo mustaqbalka qaxootiga lagu sameeyo, Human Rights Watch ayaa sidaa sheegtay.